စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ဆည်လေးတောရွာရှိ အများသုံးရေကန် ခန်းခြောက်နေ၍ သောက်သုံးရေ အခက်အခဲဖြစ်ပေ? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ မေ ၈
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မင်းဝံတောင်ရိုးအနောက် ဘက် စစ်ကိုင်း-ရွှေဘို အမှတ်(၃)ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းမကြီးဘေးရှိ ဆည်လေးတောကျေးရွာတွင် ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ အဓိက အားထားအသုံးပြုနေရသော ရေကန်မှာ ယခုအခါ ရေလုံးဝခန်း ခြောက်နေပြီဖြစ်၍ သောက်သုံးရေအတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ် နေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါရွာရှိရေကန်မှာ တစ်ဧကပတ်လည်ရှိပြီး မိုးတွင်းကာလ စုဆောင်းထားသည့် ရေကန်မှရေကို သောက်သုံးရေအဖြစ် သုံးစွဲကြရာ နွေရောက်ချိန်တွင် ရေနည်းခြင်း၊ ရေခန်းခြောက်ခြင်းများ ဖြစ် ပေါ်လေ့ရှိသဖြင့် ကျေးရွာနေပြည်သူများမှာ နွေအခါရောက်ချိန်၌ နှစ်စဉ်သောက်သုံးရေခက်ခဲခြင်းဖြစ်ပေါ်မှုအတွက် ရေအလှူရှင်များ ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရယူကြရသည်။
”ဆည်လေးတောမှာ အိမ်ခြေ ၁၂ဝ ရှိတယ်။ အဓိကအသုံး ပြုနေရတဲ့ မိုးရေကန်က နှစ်စဉ် မေလလောက်ကစပြီး ဇွန်လအထိ ရေခန်းတာကြောင့် သောက်သုံးရေတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ နှစ်စဉ် နွေရာသီမှာ ရေအခက်အခဲဖြစ်လို့ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေ ရေဂါလန် ၆ဝဝ ဆံ့ ကားလေးကို လှူထားပေးတယ်။ ရွာကျောင်း ဆရာတော်ဦးစီးပြီး ရေရှိတဲ့ နေရာတွေက ရေသယ်ပြီးပြန်လည် ရေ ပေးဝေရတယ်။ ရေတွင်းတူးတော့လည်း ရေမထွက်ဘူး” ဟု ဆည် လေးတောကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ကျော်က ပြောသည်။
ဆည်လေးတောကျေးရွာမှာ ကျောက်ကုန်းဒေသတွင်ရှိ၍ နှစ်စဉ်နွေရာသီရောက်ချိန်၌ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ ခန်းခြောက်ကာ သောက်သုံးရေအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိခြင်း၊ အဝီစိတွင်းတူးဖော် သော်လည်း ရေချိုထွက်မှုနည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် သောက်သုံးရေအ ခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသဖြင့် မေ ၇ ရက်က စစ်ကိုင်းမြို့အလှူရှင်များမှ ရေသယ်ယာဉ်များဖြင့် သောက်သုံးရေလာရောက်လှူဒါန်း ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ချင်းပြည်နယ် မတူပီမြို့နယ်ရှိ 'လိုင်လင်းပီ'လေယာဉ်ကွင်းကို ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်တွင် အပြီး တည်ဆောက?
ကင်းဒရစ်လာမာ ဂီတပူလစ်ဇာဆု ရရှိ